samedi, 20 octobre 2018 19:33
Bakalorea 2018: 37,69% ny taham-pahafahana taty Toamasina
Ny alarobia 17 oktobra tamin’ny 09ora maraina no natao ny “déliberation” ho an’i Toamasina.
Tapaka tamin’izany fa 09,75/20 no noraisina ho afaka bakalorea. Vokany dia nahitana fitomboana 04,63% ny taham-pahafahana raha noharina ny taona lasa, satria 37,69% izany tamin’ity taona ity raha tsy nisy afa-tsy 33,06% izany ny taona 2017.
Tamin’ireo mpiadina niisa 27.446 niala ireo tsy tonga an-jatony dia ny 10.899 no afaka soa aman-tsara ho an’ny bakalorea ankapobeny.
Raha ho an’ny bakalorea teknika sy teknolojika kosa dia nahatratra 42,99% izany ho an’ny voalohany, raha 61,84% izany ho an’ny faharoa.
samedi, 20 octobre 2018 19:25
FJKM: Notokanana ny toeram-panomanana Mpitandrina
Trano lehibe, tsangambaton'ny Jobily faha-50 taonan'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy faha-200 taona nidiran'ny LMS nitondra ny Filazantsara teto, ity notokanana androany teny Ivato ity ho toeram-panomanana Mpitandrina FJKM.
Vavaka eo amin'ny Kianjabe Mahamasina no hanakatona ity fankalazana ny Jobily ity rahampitso alahady 21 oktobra.
samedi, 20 octobre 2018 19:22
Sambava: Nofoanana ny propagandy saika hataon'i kandida Emma Rasolovoahangy
Araka ny fanazavan'ny lehiben'ny mpitandro filaminana, izay tonga nisakana, ny kandida lah-36 Roseline Emma Rasolovoahangy io maraina io, dia toerana tsy azo amoriam-bahoaka ny faritra nokasain'ity kandida ity hanaovana kabary androany.
samedi, 20 octobre 2018 06:19
Fanambarana nifanarahan'ireo Kandida